Iva Iko Kunakidza Kunokonzera Brand Ambassador!
musha » Ambassador Program
Kurasikirwa kunopesana Brand Brand Ambassador Program
Iwe unoda kushandisa shanduro yehupenyu here? Iwe unewe Fitness blog here? Nakidzwa kubatsira vanhu kuchengetedza mari? Kana iwe wapindura hongu kune imwe yemibvunzo iyi, tinoda kuti iwe ubatsire kuparadzira izwi pamusoro peFitness Rebates! Pakugadzirisa Kwemagariro, tinobudisa mhando dzakanakisisa dzehutano dzakabatana uye dzinoshandisa paIndaneti! Kururama kwedu kunopesana neBatumi veBrit Mabatsiri anobatsira kugovera maitiro edu uye kuparadzira shoko pamusoro pewebsite yedu.
Tiri kutsvaga vanhu muUnited States neCanada avo vakanyatsotarisana mune zvehutano nehutano hwemagariro. Iwe unofanirwa kuva nechido chekugwinya uye kuva nemashandiro emagariro evanhu svondo, Instagram, Twitter, Facebook, Pinterest, YouTube, etc. Tinobvuma vanhu kubva munzvimbo dzose dzehutano kusanganisira kuumba muviri, crossfit, martial arts martial, yoga, pilates, zumba, triathlons, marathons, mabhasikoro, mabhoti nezvimwewo.
Ndezvipi Basa Rangu seMumiririri?
Sezvakagadziriswa neFitness Rebates mumiririri, pane nzira dzakasiyana-siyana dzamunogona kubatsira kusimudzira mararamiro edu. Iwe unogona kubatsira kutitungamirira kuburikidza nekugoverana maitiro edu, mabhogi pamusoro pedu, kugovera makadhi ebhizinesi, kupfeka / kutora mapikicha ne gywear yedu, nezvimwe. Ive nechinangwa chakasiyana chekusimudzira? Iva nechokwadi chekutiudza isu kana iwe utumira email
Chii Chandinowana Nokuva Iko Kunakidza Kunokonzera Brand Ambassador?
Kana iwe wakagamuchirwa muchirongwa cheFitness Rebates mumiriri wemakambani, tichakuita iwe wakatanga nemamwe MAHERO Fitness Rebates gear kusanganisira FREE FREE t-shirt. Tarisa t-shirt dzedu kuburikidza nesu nguvo peji.
Kunoita Izvo Zvakanaka Kunobatsira Kupa Mari Inobhadhara Mari?
Panguva ino, Fitness Rebates haina kupa mari yekubhadhara mari.
Ndinofanira Kuva Mudzidzisi Wemutambo Kuti Anyore Chirongwa Chirwere Chirongwa Chibvumirano cheBritain?
Kwete iwe haufaniri kuva mutambi wenyanzvi. Tinosarudza vatambi vemarudzi ose.
Kana iwe uchifunga kuti iwe unenge wakakwana zvakakwana kwatiri, tinoda kunzwa kubva kwauri! Tumira email kuna Alex pa admin@fitnessrebates.com, vachishandisa nyaya ye email "Kurasikirwa Kwemagetsi Kunokonzera Brand Ambassador". Hamuzivi chekutaura? Ngationei pamusoro pako uye nei iwe uchifunga kuti iwe unenge wakakodzera zvakakodzera mararamiro eRebates Rebates. Usakanganwa kuisa mapepa ako ehupfumi kuitira kuti tigone kutarisa iwe! Tichaedza zvakanakisisa kuti tibvunze kune vose vanoita basa asi nekuda kwehuwandu hwemhinduro, izvi zvingasakwanisika mumatambudziko ose.
Tevera Mabhizimisi Edu MaMasisita Pamasangano Evanhu:
2 pfungwa iri "Ambassador Program"
Pingback: Nzira dzeMagariro eZvashoni | Stylish Momme